ဂရုစိုက်ခြင်းကတ်မျာ - HealthServe
Home \_ ဂရုစိုက်ခြင်းကတ်မျာ
ပထမဆုံးအကြိမ်ဂရုစိုက်ခြင်းကတ်များ (Caring Cards)ကို အသုံးပြုနေတာလား? အောက်ပါတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်ပါတယ်။
ဂရုစိုက်ခြင်းကတ်များသုံးရတာသဘောကျလား? ကတ်များရဲ့ပရင့်ထုတ်နိုင်သောဗားရှင်းကိုဒီမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျန်းမာရေးဝင်ဆောင်ရေးပရဟိတအဖွဲ့ (HealthServe) +၆၅ ၃၁၂၉ ၅၀၀၀ (၂၄ နာရီအကူအညီလိုင်း ) ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ကျန်းမာရေးဝင်ဆောင်ရေးပရဟိတအဖွဲ့ (HealthServe) +၆၅ ၃၁၂၉ ၅၀၀၀ (၂၄ နာရီအကူအညီလိုင်း )
ဂရုစိုက်ခြင်းကတ်များဆက်စပ်တဲ့မေးခွန်းတွေရှိလား။ ဖုန်းနံပါတ်ထားခဲ့ပါ! ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမြန်မြန်ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပါမည်။